၇ မျိုးစိတ် Fibromyalgia Pain [မတူညီသော Fibromyalgia နာကျင်မှုအကြောင်း]
၇ မျိုးစိတ် Fibromyalgia နာကျင်မှု
06 / 03 / 2019 /0 မှတ်ချက်/i Fibromyalgia/av ရေတံခွန်
Fibromyalgia သည်ပျော့ပျောင်းသောအဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းနာကျင်မှုရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပြီးမတူညီသောနာကျင်မှုအမျိုးအစားများအတွက်အခြေခံကိုပေးနိုင်သည်။ လူအများစုက၎င်းကိုမတူညီသောကွဲပြားခြားနားမှုများအဖြစ်ခွဲခြားသည်ကိုမသိကြပါ။ ဤတွင်သင်သိထားသင့်သည့် fibromyalgia နာကျင်မှု (၇) မျိုးဖြစ်သည်။
fibromyalgia တွင်ဤဝေဒနာများစွာသည်ထပ်တူကျနိုင်ပြီးနာကျင်မှုပုံမှာအလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့ fibromyalgia နာကျင်မှုအမျိုးအစားခုနစ်မျိုးကိုဖြတ်သန်းသွားပြီးသင်ဤအကြောင်းပိုမိုလေ့လာနိုင်သည်။ အကယ်၍ မိတ်ဆွေတစ် ဦး သို့မဟုတ်မိသားစုဝင်တွင် fibromyalgia ရှိပါကဤဆောင်းပါးကသင့်အားဤရှုပ်ထွေးသောရောဂါလက္ခဏာများက၎င်းတို့အားမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုပိုမိုနားလည်ရန်ကူညီနိုင်သည်။
အခြားနာတာရှည်နာကျင်မှုရောဂါနှင့်ရောဂါရှိသူများကိုကုသခြင်းနှင့်စစ်ဆေးခြင်းအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအခွင့်အလမ်းများရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့တိုက်ပွဲ ၀ င်သည်။. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ FB စာမျက်နှာပေါ်မှာငါတို့လိုပဲ og ကျွန်ုပ်တို့၏ယူကျု့ချန်နယ် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတွေအတွက်နေ့စဉ်ဘဝတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ငါတို့ကိုလူမှုမီဒီယာထဲမှာပါ။
ဤဆောင်းပါးသည် fibromyalgia နာကျင်မှုအမျိုးအစားခုနစ်မျိုးကိုလေ့လာလိမ့်မည် - သူတို့ထဲကတချို့ဟာမင်းကိုအံ့အားသင့်စေမှာသေချာတယ်။ ဆောင်းပါး၏အောက်ခြေတွင်အခြားစာဖတ်သူများထံမှမှတ်ချက်များကိုဖတ်။ ကောင်းသောအကြံဥာဏ်များလည်းရနိုင်သည်။
သင်တစ်ခုခုစဉ်းစားနေပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာမှကျွန်ုပ်တို့ကိုလိုက်နာပါ«Vondt.net - မင်းရဲ့နာကျင်မှုကိုသက်သာအောင်လုပ်တယ်»သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ Youtube ချန်နယ် နေ့စဉ်အကြံဥာဏ်နှင့်အသုံးဝင်သောကျန်းမာရေးအချက်အလက်အတွက် (link အသစ်ဖွင့်လှစ်) ။
Hyperalgesia သည်သင် fibromyalgia ရှိသည့်အခါသင်ခံစားရသည့်နာကျင်မှုကိုတိုးမြှင့်သတ်မှတ်သည့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။ 'Hyper' ကိုဆိုလိုသည် ပုံမှန်ထက်ပို နှင့် "algesia" သည်ထပ်တူကျသည် နာခြင်း.
fibromyalgia ရှိသူအချို့၏ ဦး နှောက်အစိတ်အပိုင်းများသည်နာကျင်မှုအချက်ပြမှုများကိုကွဲပြားစွာအနက်ဖွင့်ကြောင်းသုတေသနပြုချက်ကပြသခဲ့သည် - ထိုအချက်ပြမှုများကိုပိုမိုမြင့်မားသောအသံအတိုးအကျယ်ဖြင့်အနက်ဖွင့်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာနာကျင်မှုအချက်ပြမှုသည်အဓိပ္ပာယ်ကောက်လွဲမှားပြီးကျယ်ပြန့်လာသည်။
အတိအကျဤသည် fibromyalgia နှင့်အတူသူများသည်အခြားသူများထက်ကြွက်သားများ၊ အာရုံကြောများနှင့်အဆစ်များနာကျင်ခြင်းမှပိုမိုပြင်းထန်သောနာကျင်မှုကိုခံစားရလေ့ရှိသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤလူနာအုပ်စုသည်နေ့စဉ်ကုသမှုအပေါ်ပိုမိုမှီခိုနေရသည် ရွေ့လျားလေ့ကျင့်ခန်း နှင့်ထုံးစံလေ့ကျင့်ရေး (ကဲ့သို့သော ရေပူရေကန်တွင်အုပ်စုလိုက်လေ့ကျင့်ခြင်း).
ဆက်ဖတ်ရန်: - ၅ Fibromyalgia နှင့်အတူလေ့ကျင့်ခန်းလေ့ကျင့်ခန်း
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေ့ကျင့်ခန်းတွေအကြောင်းပိုမိုဖတ်ရှုရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ - သို့မဟုတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ။
ဗွီဒီယို - Fibromyalgia ရှိသူများအတွက်လှုပ်ရှားမှုလေ့ကျင့်ခန်း
fibromyalgia နှင့်အတူအဆင်ပြေအောင်အဆင်ပြေအောင်ရွေ့လျားလေ့ကျင့်ခန်းကိုသိခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အောက်ဖော်ပြပါဗီဒီယိုသည်ရွေ့လျားခြင်း၊ လည်ပတ်ခြင်းနှင့်နာကျင်မှုကိုသက်သာစေသောနူးညံ့သိမ်မွေ့သောလေ့ကျင့်ခန်းငါးခုကိုပြသထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့မိသားစုနှင့်ပူးပေါင်းပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ယူကျု့ချန်နယ်ကိုရယူပါ လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်များနှင့်ကျန်းမာရေးဗဟုသုတများအတွက် (ဒီမှာနှိပ်ပါ) ကြိုဆိုပါတယ်
fibromyalgia နှင့်အတူများစွာသော neuropathic နာကျင်မှုကြောင့်ထိခိုက်နေကြသည်။ ဤကဲ့သို့နာကျင်မှုသည်လက်များနှင့်ခြေထောက်များတွင်ငိုက်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း၊ ယားခြင်း၊ ထုံခြင်း၊ ဒီရောဂါလက္ခဏာတွေလည်းတိုက်ရိုက်နာကျင်နိုင်ပါတယ်။
ဆေးဝါးအပါအ ၀ င်နာကျင်မှုကိုသက်သာစေမည့်ကုသမှုနည်းလမ်းများစွာရှိပါသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသမှု၊ ထုံးစံအတိုင်းအဆစ်နှင့်အပ်စိုက်ကုထုံးများသည်အာရုံကြောဆိုင်ရာနာကျင်မှုကိုသက်သာစေရန်ကုသနည်းများဖြစ်သည်။
လူများစွာသည်နေ့စဉ်ဘ ၀ ကိုပျက်စီးစေသည့်နာတာရှည်နာကျင်မှုနှင့်နာမကျန်းမှုများကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေသည် ဒါကြောင့်ငါတို့ကမင်းကိုအားပေးတယ် ဤဆောင်းပါးကိုလူမှုမီဒီယာတွင်မျှဝေပါ, ကျွန်ုပ်တို့၏ Facebook စာမျက်နှာကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါ နှင့် "နာတာရှည်နာကျင်မှုရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသုတေသနပြုရန်လိုသည်" ဟုပြောပါ။
ဤနည်းအားဖြင့်လူတစ် ဦး သည်ဤရောဂါလက္ခဏာနှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါလက္ခဏာများကိုပိုမိုမြင်သာအောင်ပြုလုပ်ပြီးလူအများအပြားကိုအလေးအနက်ထားရန်လိုအပ်သည် - ထို့ကြောင့်သူတို့လိုအပ်သောအကူအညီကိုရနိုင်သည်။ ဤသို့သောအာရုံစူးစိုက်မှုတိုးလာခြင်းသည်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကုသခြင်းနည်းလမ်းအသစ်များအတွက်သုတေသနအတွက်ပိုမိုရန်ပုံငွေသို့ ဦး တည်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်
ဒါ့အပြင်ဖတ်ပါ: - 15 Rheumatism ၏အစောပိုင်းလက္ခဏာများ
3. Fibromyalgia ခေါင်းကိုက်ခြင်း
fibromyalgia ရှိသူများသည်များသောအားဖြင့်ခေါင်းကိုက်လေ့ရှိသည်။ တကယ်တော့ဒီလူနာအုပ်စုလည်ပင်းနှင့်ဆက်စပ်သောခေါင်းကိုက်ခြင်း (စိတ်ဖိစီးမှုခေါင်းကိုက်ခြင်း) နှင့်ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်းများကြောင့်ပိုပြီးသိသိသာသာထိခိုက်ခံရဖို့အဘို့အဒါဟာအဖြစ်များသည်။
ဤသည် fibromyalgia နှင့်အတူရှိသူများအတွက်အချက်သုံးချက်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်:
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှု (နာတာရှည်နာကျင်မှုနှင့်ညံ့ဖျင်းသောအိပ်စက်ခြင်း - စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်ထက်ကျော်လွန်ခြင်း)
တနည်းကား၊ ဤအချက်သုံးချက်၏ဘုံဆခွဲကိန်းဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည် hypersensitivity ဒါကြောင့် ဦး နှောက်ကအချက်ပြမှုတွေကိုအားကောင်းလွန်းတယ်။ ထို့အပြင် fibromyalgia ကိုအနာပျောက်စေသောရောဂါပျောက်ကင်းစေနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်သောဤအဓိကအချက်မှာအတိအကျဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင်ဖတ်ပါ: - Fibromyalgia တွင်ရေပူရေကန်တွင်လေ့ကျင့်ခန်းကိုမည်သို့ကူညီသနည်း
fibromyalgia ရှိသူများသည် ၅၀ ရာနှုန်းသောဒဏ်ရာရနိုင်သည် စိတ်တိုအူသိမ်အူမရောဂါ. ဝမ်းဗိုက်ကြွက်တက်ခြင်း၊ ဓာတ်ငွေ့နှင့်ဖောင်းပွခြင်းစသောလက္ခဏာများဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာပြသောအစာခြေစနစ်ဖြစ်သည်။ အခြားရောဂါလက္ခဏာများတွင်ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ ၀ မ်းလျှောခြင်း၊ ပျို့ချင်ခြင်း၊
Fibromyalgia သည်တင်ပါးဆုံတွင်းအဆစ်များ၌သာမကတင်ပါးဆုံဆို့နာနှင့်ဆီးခုံမို့မို့ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှစ်မျိုးလုံးအတွက် pelvic နာကျင်မှုကိုတိုးပွားစေနိုင်သည်။ ဝိသေသလက္ခဏာများသည်အများအားဖြင့်ဆီးသွားခြင်းနှင့်သင်မကြာခဏ 'ဆီးသွားခြင်း' ကိုဆိုလိုသည်။
ထို့ကြောင့် fibromyalgia diet ကိုလိုက်နာရန်နှင့်အမျိုးသားအစားအစာဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များကိုလိုက်နာရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အောက်ဖော်ပြပါဆောင်းပါး၌ fibromyalgia ရောဂါခံစားနေရသူများအတွက်အကောင်းဆုံးအစားအစာသည်သုတေသနပြုချက်ကိုဖတ်ရှုနိုင်သည်။
ဒါ့အပြင်ဖတ်ပါ: - သုတေသနအစီရင်ခံစာ - ဤသည်မှာအကောင်းဆုံး Fibromyalgia အစားအစာဖြစ်သည်
fibro နှင့်အတူလိုက်လျောညီထွေဖြစ်သည့်မှန်ကန်သောအစားအစာအကြောင်းပိုမိုဖတ်ရှုရန်အထက်ပါပုံသို့မဟုတ် link ကိုနှိပ်ပါ။
ဒါ့အပြင်ဖတ်ပါ: Irritable Bowel Syndrome အကြောင်းသိသင့်သိထိုက်သောအရာ
fibromyalgia ၏ထူးခြားသောလက္ခဏာမှာကြွက်သားများနှင့်ပျော့ပျောင်းသောတစ်ရှူးများတွင်ပျံ့နှံ့။ မွဲသောနာကျင်မှုဖြစ်သည်။ ဤနာကျင်မှုများကိုလက်များ၊ ခြေထောက်များ၊ လည်ပင်းများနှင့်ပခုံးများအပါအဝင်နက်ရှိုင်းသောနာကျင်မှု၊ နူးညံ့ကြင်နာမှု၊
နောက်ကျောနာကျင်မှု - အာရုံကြောများကိုနာကျင်စေပြီးခြေထောက်များကိုဓါတ်ရောင်ခြည်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
နာကျင်မှုသည်ကွဲပြား။ လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိနေရာအမျိုးမျိုးသို့ဝင်နိုင်ကြောင်းသတိရပါ။ လက်နက်နှင့်လက်အပါအဝင်။ အောက်ဖော်ပြပါဆောင်းပါး၌အရိုးအဆစ်နာရောဂါကိုသင်၏လက်၌ကိုင်တွယ်ရန်ကောင်းမွန်သောလေ့ကျင့်ခန်း ၇ ခုကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။
ဒါ့အပြင်ဖတ်ပါ: - လက်ကြောအဆစ်နာရောဂါအတွက်လေ့ကျင့်ခန်း ၇
အဆစ်နာခြင်းနှင့်တောင့်တင်းခြင်း fibromyalgia နှင့်အတူလူများတွင်ရောဂါလက္ခဏာများအစီရင်ခံရသည်။ ၎င်းသည်အခြားအရာများအကြားရွေ့လျားနိုင်စွမ်းကိုကန့်သတ်သောတင်းမာ။ နာကျင်သောကြွက်သားများကြောင့်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်ခိုင်မာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ရောင်ရမ်းအဆစ်နှင့်မတူဘဲ, fibromyalgia ၏အဆစ်၏ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်ရောင်ခြင်းများသောအားဖြင့်မရှိ။ ဤရောဂါသည်အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းသို့မဟုတ်အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်ခွဲခြားရန်နည်းလမ်းများအနက်မှတစ်ခုမှာလူ၏အဆစ်များသိသိသာသာရောင်လာသည်ကိုသင်မကြာခဏတွေ့နိုင်သည်။
သင်အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်အတူနှောင့်အယှက်ဖြစ်ပါသလား အောက်တွင်သင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိဘဲ - သဘာဝကုသမှုရှစ်ခုအကြောင်းကိုဖတ်နိုင်သည်။
ဒါ့အပြင်ဖတ်ပါ: - အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုဆန့်ကျင်သောသဘာဝရောင်ရမ်းခြင်းနည်းလမ်း ၈
တို့ထိခြင်းဖြင့်သင့်အရေပြားနာကျင်နေသလား။ အဝတ်အစားမှအလင်းရောင်ထိမိခြင်းသို့မဟုတ်ဖော်ရွေသောအမူအယာများပင်လျှင်တကယ်နာကျင်နိုင်ကြောင်းသင်သတိပြုမိသလား။ ဒါ allodynia - များစွာသောသူတို့ကိုအံ့အားသင့်စေတဲ့နာကျင်မှုလက္ခဏာ။ ထိုအရွေးကောက်တော်မူသောအနေဖြင့်အလင်းအနှိပ်မှာကြိုးစားမှုကျရှုံးခဲ့ကြစေသည်။
အများစုက Allodynia ကိုအရေပြားတွင်ပိုမိုပြင်းထန်သောနေလောင်ခြင်းခံရခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်ဟုဖော်ပြကြသည်။ သုတေသနပြုမှုအရ၎င်းသည် fibromyalgia နှင့်ဆက်စပ်သည့်ဗဟို sensitization ကြောင့် hypersensitivity တုံ့ပြန်မှုကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာအချက်ပြမှုများကို ဦး နှောက်ထဲတွင်လွဲမှားစွာအနက်ဖွင့်ပြီးရလဒ်မှာ - နာခြင်း.
Allodynia သည်ရှားပါးသောနာကျင်မှုမျိုးဖြစ်သည်။ fibromyalgia အပြင်ဒီနာကျင်မှုကို neuropathies, shingles and migraine မှာသာတွေ့ရပါတယ်။
ဒါ့အပြင်ဖတ်ပါ:6ပခုံး၏ထူးခြားသောအရိုးအဆစ်နာဆန့်ကျင်လေ့ကျင့်ခန်း
ပိုမိုသိရှိလိုပါက? ဤအဖွဲ့သို့ ဝင်၍ သတင်းအချက်အလက်ကိုမျှဝေပါ။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အုပ်စုနှင့်ဆက်သွယ်ပါ «အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်နာတာရှည်နာကျင်မှု - နော်ဝေ - သုတေသနနှင့်သတင်း»အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်နာတာရှည်ရောဂါများနှင့်ပတ်သက်သည့်သုတေသနနှင့်မီဒီယာဆိုင်ရာနောက်ဆုံးရေးသားချက်များအတွက် ((ဒီမှာနှိပ်ပါ) ။ ဤနေရာတွင်အသင်း ၀ င်များသည်သူတို့၏အတွေ့အကြုံများနှင့်အကြံဥာဏ်များဖလှယ်ခြင်းဖြင့်တစ်နေ့တာအချိန်မရွေးအကူအညီနှင့်အထောက်အပံ့များရနိုင်သည်။
စာရင်းသွင်းရန်အခမဲ့ခံစားရသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်သံလိုင်းပေါ်မှာ (ဒီမှာနှိပ်ပါ) - နေ့စဉ်ကျန်းမာရေးအကြံပေးချက်များနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်များအတွက် FB ရှိကျွန်ုပ်တို့၏စာမျက်နှာကိုလိုက်နာပါ။
နာတာရှည်နာကျင်မှုကိုတိုက်ဖျက်ရန်ဤဆောင်းပါးသည်သင့်အားကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်မျှော်လင့်ပါသည်။ အကယ်၍ ဤအရာသည်သင်လည်းအသည်းအသန်ဖြစ်နေသည်ဆိုလျှင်လူမှုရေးမီဒီယာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏မိသားစုနှင့်ပူးပေါင်းရန်နှင့်ဆောင်းပါးကိုမျှဝေရန်သင်ရွေးချယ်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။
တနည်းကား, ငါတို့ချင်တယ် ဒီဆောင်းပါးကိုလူမှုရေးမီဒီယာဒါမှမဟုတ်သင့်ဘလော့ဂ်ကနေတစ်ဆင့်မျှဝေဖို့ကောင်းကောင်းတောင်းပါ (ဆောင်းပါးနှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပါ) နားလည်ခြင်း၊ အထွေထွေဗဟုသုတနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးလာခြင်းသည်နာတာရှည်နာကျင်မှုရောဂါခံစားနေရသူများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနေ့စဉ်ဘဝဆီသို့ ဦး တည်သည့်ပထမဆုံးအဆင့်များဖြစ်သည်။
ရွေးချယ်မှုက - FB တွင်တိုက်ရိုက်မျှဝေပါ - ၀ ဘ်ဆိုဒ်လိပ်စာကိုကူးယူပြီးသင်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာသို့မဟုတ်သင်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည့်သက်ဆိုင်ရာဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်ကူးထည့်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် အောက်ပါ "SHARE" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ သင့်ရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်မှာနောက်ထပ် post ကိုမျှဝေပါ။
Option B: သင့်ဘလော့ဂ်ပေါ်ရှိဆောင်းပါးနှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပါ။
ရွေးချယ်စရာဂ - လိုက်နာပါ ကျွန်ုပ်တို့၏ Facebook စာမျက်နှာ (ဆန္ဒရှိလျှင်ဤနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ပါ) နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ယူကျု့ချန်နယ် (ပိုမိုအခမဲ့ဗီဒီယိုများအတွက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ!)
နောက်စာမျက်နှာ \_ t - ဤအရာကိုသင်၏လက်၌အရိုးပွရောဂါအကြောင်းသင်သိသင့်သည်
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/de-syv-typene-av-fibromyalgismerter.jpg?media=1648573622 368 700 ရေတံခွန် https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ရေတံခွန်2019-03-06 20:14:072021-03-24 13:24:42၇ မျိုးစိတ် Fibromyalgia နာကျင်မှု
6 ပခုံး၏ထူးခြားသောအရိုးအဆစ်နာဆန့်ကျင်လေ့ကျင့်ခန်း နံနက်ပိုင်းတွင် Fibromyalgia နှင့်နာကျင်မှု